Ngwa ngwa ọdịnala: Kedu otu iszọ Mkpa, Prototyping, na Ule? | Martech Zone
Enwere ezigbo ego na ịrụ ọrụ omenala ngwa ngwa mmepe dị na atụmatụ na prototyping adọ. Oge ejiri hụ na ahụmịhe onye ọrụ bụ ezigbo dị oke mkpa maka ọganiihu nke nnabata na ngwa mkpanaka gị, n'agbanyeghị. Ma naanị 52% na-eji usoro nnwale n'ihi na ha mobile ngwa dị ka a akụkọ si Accenture!
[igbe ụdị = ”download” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”90%”] Jiri anyị Mgbakwunye njikọ na bilie na 30% pụọ na Proto.io gị Ndebanye aha kwa afọ! Mepụta ezigbo ntụkwasị obi na ngwa mkparịta ụka mkparịta ụka mkparịta ụka zuru oke na nkeji nke enwere ike ịhụ site na ihe nchọgharị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka.
Akụkọ ahụ na-egosi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị isi niile na-eche na ha mobile ngwa ahụmahụ bụ larịị. Chei! Jikọta nke ahụ na omume onye ọrụ ma ị nweela nsogbu. TechCrunch kesara stats na naanị 79% nke ndị ọrụ mkpanaka ga-anwale ngwa nke ugboro abụọ ma ọ bụrụ na ha enweghị ezigbo ahụmịhe onye ọrụ, nke ahụ wee daa na 16% nke ndị ọrụ na-agba mbọ oge nke abụọ. Echiche a nke gị ndị ọrụ ga-abụ ndị nnwale gị bụ ọdachi enyere na ha ga-ada mbà kama ịga n'ihu na-arụ ọrụ na mmelite gị.
Pasent 56 nke ndị isi mkpanaka a nyochara kwuru na ọ na-ewe site na ọnwa 7 ruo ihe karịrị 1 afọ iji wuo otu ngwa yana pasent 18 na-ekwu na ha na-emefu site na $ 500,000 ruo ihe karịrị $ 1,000,000 kwa ngwa. Pasent 50 nke CIO chere na usoro a na-ewe oke ogologo; Pasent 24 kwuru na ọ bụ ihe na-akpata obi nkoropụ. Isi Iyi: Kinvey.
Nke ahụ bụ nnukwu ụgwọ maka ụlọ ọrụ ndị na-anaghị ahụ ihe ọ bụla laghachi na ntinye ego nke ngwa mkpanaka.
Tags: Accentureaccenture dijitalụngwa ngwa ngwa orumobiel ngwa inaụgwọ mobiel ngwaụgwọ ngwa mkpanaakangwa mkpanakamobile ngwa prototypingule anwaleproto.io
Sep 8, 2017 na 3: 48 AM
gịnị ka nke a pụtara?
”Oge nọrọ iji hụ na onye ọrụ ahụmahụ bụ ezigbo dị oké mkpa ka ihe ịga nke ọma gị mobile ngwa nkuchi na ojiji, ezie. “
Jun 14, 2018 na 1:14 AM
Ọ pụtara na nnukwu itinye ego na ahụmịhe onye ọrụ dị oke mkpa mgbe ị na-emepe ngwa mkpanaka. Ọ bụrụ n’itinye ego gị niile na mmepe nke ngwa a, mana ọ na-esiri gị ike iji, ị ga-egbusi oge na ego. Na mgbakwunye, ịnwa ikwu ndị na-ege gị ntị ka ha nwalee ngwa gị nke ugboro abụọ siri ezigbo ike.